UMatilda waseFlanders: UWilliam uMlawuli weNqoqo
UWilliam uMlawuli weNqotyana
Mayelana neMatilda yaseFlanders:
Yaziwa ngokuba ngu- Queen of England ukusuka ngo-1068; umfazi kaWilliam uMnqobi ; ngamanye amaxesha i-regent yakhe; Kwakudala kuthethwa ngokuba ngumculi we-tapetry yeBaye, kodwa abaphengululi ngoku baqinisekile ukuba wayebandakanyeke ngqo
Imihla: malunga no-1031-Novemba 2, 1083
Yaziwa nangokuthi: Mathilde, Mahault
UBawo : uBaldwin V weFlanders
Umama : U-Adele (Alix) waseFransi, intombi kaRobert II waseFransi, owayekade etshata noRichard III waseNormandy, umzalwana kaHugh Capet, uKumkani waseFransi
Abazalwana : uBaldwin, uRobert
Umyeni : UWilliam, uMduka waseNormandy, owaza kuthiwa nguWilliam uMnqobi, uWilliam I waseNgilani
Abantwana : onyana abane, iintombi ezintlanu zasinda ebuntwaneni; abantwana abalishumi elinanye. Abantwana ziquka:
UWilliam Rufus (1056-1100), uKumkani waseNgilandi
Adela (malunga no-1062-1138), watshata noStefano, Count of Blois
UHenry Beauclerc (1068-1135), uKumkani waseNgilandi
Okunye malunga neMatilda yaseFlanders:
UWilliam waseNormandy wancenga umtshato kuMatilda waseFlanders ngo-1053, kwaye, ngokwemfundiso yakhe, waqale wenqaba isicelo sakhe. Umele ukuba umxoshe aze amphose emhlabathini ngamabhinqa akhe ekuphenduleni kwakhe ukwenqaba (amabali ahluke). Ngenxa yokuchasa kukayise emva kokuhlambalaza, uMatilda wamkela umtshato. Ngenxa yobudlelwane babo obusondeleyo - babengabazala-baxotshiwe kodwa uPapa wabuya xa ngamnye wakhela i-abbey njengepente.
Emva kokuba umyeni wakhe ehlasela iNgilani aze athathe ubukumkani , uMatilda weza eNgilani ukuze ajoyine umyeni wakhe kwaye wayenkosikazi engumqhele waseWinchester Cathedral. Umzala kaMatilda ovela kuAlfred Omkhulu wongezelela ukuthembeka kwebango likaWilliam kwisihlalo sobukhosi saseNgesi. Ngethuba likaWilliam ngokungaqhelekanga, wayekhonza njenge-regent, ngamanye amaxesha nonyana wabo, uRobert Curthose, bamncedisa kuloo mi sebenzi.
Xa uRobert Curthose evukela uyise, uMatilda wayekhonza yedwa njenge-regent.
UMatilda noWilliam bahlukana, kwaye wachitha iminyaka yakhe yokugqibela e-Normandy ngokwahlukileyo, kwi-Abbaye ukuya kwiDames eKaen - enye i-abbey ayeyakhe njengengeniso yomtshato, kwaye ingcwaba lakhe likuloo ndawo. Xa uMatilda efa, uWilliam washiya ukuzingela ukubonisa intlungu.
Ukuphakama kweMatilda yaseFlanders
I-Matilda yaseFlanders yayikholelwa, emva kokufundwa kwengcwaba lakhe ngo-1959 kunye nemilinganiselo yezinto eziseleyo, bekuye malunga ne-4'2 "ubude." Nangona kunjalo, abaninzi abaphengululi, kunye nenkokeli yokuqala yolu hlobo, uProfesa Dastague (Institut d'Anthropologie , U-Caen), ungakholelwa oku kuthethwa ngokuchanekileyo. Ibhinqa elincinci lingenakukwazi ukuzala abantwana abasithoba, kunye neyesibhozo ezenza ukuba zibe ngabantu abadala (ngakumbi malunga nale nto: yayinguMatilda? ", Journal of Obstetrics neGynaecolory, uMqulu 1, Issue 4, 1981.)
IJografi ye-United Arab Emirates
"I-Santa Lap" I-Christmas Improv Game